Yeka ukuthi sihle kangakanani ukwenza isipho ngezandla zabo ukuba umngane, umuntu! Futhi indlela bekungaba kuhle ukugqoka into ithungwe izandla abanakekelayo umama, unkosikazi, ethandekayo! Kuleli phephandaba, siphakamisa ukuba bathathe isibonelo besilisa izikibha ezemidlalo Raglan, kanye ezinye izincomo abenze.
Okunhlobonhlobo amahembe besilisa
Wonke umuntu e kwekilasi nakanjani zikhona eziningana izinhlobo izikibha, yena ubeka ku, kuye ngokuthi inkathi, umcimbi (umhlangano ibhizinisi, uya ehhovisi, umhlangano, ezokungcebeleka) kanye nemizwelo.
Kodwa kukhona ngezigaba ezithile ngeziphansi:
T-Shirt ezimhlophe (ngokuvamile yenziwa zikakotini Indwangu) - esigqokwa ngemikhosi esisemthethweni noma nje sishaywe ku yacht noma emzini nomkhaya wakhe.
Nge V-entanyeni ngokuvamile ekhethwe amadoda ukuphumula, uhamba eduze kwamanzi, ogwini. Futhi kungcono njengoba Shirt ezemidlalo.
"Polo" - kusuka cotton nge collar amancane izinkinobho ezimbalwa. I intandokazi ngamadoda, kungakhathaliseki umsebenzi nokunambitheka okungefani.
"Hanley". Libuye libe ukotini isikibha ngaphandle collar, kodwa izinkinobho ezimbalwa. It kungenziwa igqoke esikhundleni "Polo".
"Rugby" - eyintandokazi kakhulu ngamadoda ucezu ikhabethe. It has a collar futhi imbobo encane entanyeni, kodwa akanawo izinkinobho. Ngokuvamile ithungwe kusukela Indwangu ukumelana kakhulu, okuyinto akesabi ziwashwa kaningi.
amahembe Iphethini zabesilisa
Indlela thunga ihembe womuntu? Landelayo kuyoba model of ukuncishiselwa elula ngqo. Lwezindinganiso kule ndlela inombolo esincane, okuyinto lula kakhulu umsebenzi.
Ngakho, kungenzeka uphawulile ukuthi kunezimiso cut enjalo uyakucabangela sibalo esincane, elingafunwa wenze lesi isikibha. Kungcono ukuqala elula. Futhi ngemva kokuba inkosi abanolwazi kakhudlwana zingenziwa sezinhlobo ezingcono ukusikeka, okuyinto acabangele namahlombe, nokuma komzimba nokunye.
Ukwakha emuva iphethini amahembe
Ukuqalisa uhlelo lwakhe lokufundisa abantu umsebenzi, kumele ukhiphe lezi izilinganiso:
intamo poluobhvat - Cm;
esifubeni poluobhvat - Kr;
umkhiqizo ukuphakama - Dee;
Ukuthola besilisa ukwakhiwa iphethini shirts, kudingekile ukwakha isikwele phezu idatha etholwe, ububanzi okuyinto (AB). Eqinisweni, ububanzi Ngokuzayo isikibha nesikhindi liqukethe webele poluobhvata plus isabelo esincane spare umzimba fit. Range sithole ngoba madoda t-shirts sikhethe cut ziyahlukahluka kakhulu. Kulokhu kwanele ukuze uhlale e-10-12 cm.
A ukuphakama nalutho elingunxande (AN) kuyoba alingane esilinganisweni ukuphakama umkhiqizo.
Ngakho-ke, kuboniswa ukuthi AN kuyinto midpoint we ngemuva iyembe VN1 - umkhatsi phambi ingxenye. Phezulu umugqa - AB - umugqa ezingeni ehlombe, futhi umugqa okuyinto ezansi - HH1 - iyona sendaba.
Qalisa emgqeni esifubeni, backrest ububanzi armhole
Badiliza kusukela iphuzu "A" phansi ingxenye yesithathu isuswe webele izilinganiso umkhumbi. Ngokulandelayo, sinezela lesi silinganiso 8 cm. Thina selisho leli phuzu "G". Manje kubalulekile kusukela iphuzu "G" ukubamba ovundlile, okuyinto ephambana ne forehand umugqa. "G1" Kuyoba iphuzu. Ngakho, washiya webele umugqa.
Ngo ohlangothini lwesokunene iphuzu "D" phezu ovundlile (esifubeni umugqa) kufanele zihlehlise eyodwa ukubaluleka webele umkhumbi bese wengeza kule sibalo 6 cm. Iphuzu nomphumela luchazwa ngokuthi "F2". Kulo thwi udinga ukudweba umugqa, okuyinto ezimpambanweni zomgwaqo emgqeni ehlombe unika iphuzu "P".
Manje kudingeka uchaze ukuthi ububanzi imikhiqizo armhole:
Right kusukela iphuzu "T2" agudle libanjwe eceleni ingxenye yesine ka esifubeni ukubaluleka poluobhvata. Engeza 4 cm.
Iphuzu omusha ubizwa ngokuthi "G3". Ibanga (T2-T3) kuyinto ububanzi armhole.
Ngokumile up kusuka iphuzu "T3" kuyadingeka ukuze udwebe umugqa. Point of empambana yayo ngolayini ehlombe - "B1".
Ububanzi armhole is aba nguhhafu. Khona-ke, ku-iphethini okhonjiswe "T4" iphuzu.
Kusukela iphuzu "T4" Kunenkolelo umugqa thwi aqondile sendaba. Iphuzu kuhlangana okhonjiswe "H2". Lona umugqa esigabeni ohlangothini.
Ngaphezu kwalokho kusukela iphuzu A kuya ngakwesokudla agudle ehlombe kufanele zihlehlise eyodwa ukubaluleka lwesithathu umkhumbi entanyeni, ukungeza kule inzuzo 1 cm wathola iphuzu -. "A1".
Line (A-A1) kuyinto ububanzi lwegciwane.
Ngaphezu kwalokho thwi phezulu kusukela iphuzu "A1" kuyinto umugqa kwenziwe ngalo uyohluma ukuphakama. Futhi elilingana nengxenye ububanzi igciwane lokususa 0.5 cm. Iphuzu okuholela kuyothiwa "A2".
Line (A1-A2) yilona ukuphakama igciwane.
Manje kudingeka ukwakha ingxenye entanyeni emuva. Ukuze leli phuzu "A" futhi "A2" Kumele uxhumeke umugqa ngokushelela ngilugweda.
Kusukela iphuzu "P" thwi phansi lihlehle 2 cm bese uqoke iphuzu "P1". Ngokulandelayo, ubambe ingxenye kusukela iphuzu "A2" by "P1", kancane asinikeze iphuzu "P2" iphendula 1-1.5 cm ..
Iphethini zabesilisa t-shirts ukulungele emuva.
Isakhiwo iphethini forehand t-shirts
Isiwombe sesibili umsebenzi iphethini besilisa isikibha - Imi emashelufini (ngaphambi):
Ububanzi emphinjeni oluhambisana ngemuva ububanzi entanyeni eshalofini (igciwane). Ngaphandle kwalokho, ngokuvumelana amasu, entanyeni ukuphakama elilingana forehand ububanzi.
Kusukela "B" ngakwesobunxele ku evundla mpo phansi isidingo sokungaqali eziningi amasentimitha, okuyinani elilingana emgqeni (AA1). Amaphuzu etholwe ezikhonjiswe ngokulandelana "B2" futhi "B3".
Ngakho, BB2 BB3 = = AA1.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwakha umugqa emphinjeni onqenqemeni kusukela iphuzu "B2" ngokusebenzisa "B3" iphuzu. Lokhu kungenziwa nge ikhampasi.
Ngokumile wezidingo iphuzu "B1" lihlehle 4cm iphuzu okusha -. "P4".
Manje, kusukela "B2" ngokusebenzisa "P4" kuyadingeka ukuze emgqeni ehlombe, inkontilaki kaNgcobo kuya 1-1.5 cm okuholela iphuzu -. "P5".
Ukwakhiwa ingxenye eyinhloko iphethini forehand besilisa isikibha kuqedile.
Isakhiwo iphethini emikhonweni nezemidlalo zabesilisa izikibha
Okokuqala, kukhona udinga ukuthatha izilinganiso zakho. Omunye nesilinganiso - kusukela ikhwapha ehlombe kanti eyesibili - ehlombe phansi yingalo ubude oyifunayo:
Kusukela iphuzu "A" ukhombe "B" ukunquma isikhungo - iphuzu "C".
Down kusukela "A" futhi "B" kuyadingeka ukuze ukuqhuba njalo ngezikhathi ezithile lweshumi igesi qeda. Ukwakheka imibandela emisha "E" futhi "E1".
Ngokuhlanganisa kubo, kufanele siqhubeke ubambe umugqa bacondze etindzaweni letehlukene ubude AC. Ukubona "F" futhi "F1".
Ngaphezu kwalokho, BE1 ingxenye uhlukaniswa uba nengxenye, ukwakha iphuzu elisha "D1". A "E" isigamu phezulu kufanele imisiwe ingxenye AE plus engeza 1 cm. Umphumela waba iphuzu "D".
Manje kusukela "C" ukudweba phansi komugqa perpendicular kabani obuphelele ilingana nobude emkhonweni. Okhonjiswe incwadi iphuzu elisha "Mina".
Therefrom bacondze etindzaweni letehlukene lihlehle FF1 2 cm, ngaleyo ndlela ethola "L" futhi "L1". Manje kudingeka ukuba uxhume nabo nge "F" futhi "F1".
Ngakho, umugqa okuqhubekayo futhi abushelelezi yokuxhuma F, D, C, F1, D1, ukuthola umugqa OKATO emikhonweni amahembe.
Kusukela "C" phansi kumele ukuhlehlisa CF 11 cm umugqa bese uqoke ibha kabili, bese ngokusebenzisa umugqa CF1 - njengoba 11 cm, futhi eyodwa inothi ibha. Kuyinto amalebula ezibalulekile okuzokwenziwa ithungwe ibe emkhonweni ku armhole komkhiqizo.
T-shirt nge imikhono Raglan
Indwangu ngoba kungaba kokubili ukunitha nokotini. Ngaphezu kwalokho, kungase kudingeke iribhoni edging (ngoba izigaba kuphelile processing).
Kuyini isikibha Raglan? Lona uma umkhiqizo kroyatsya sleeve se ne ehlombe ingxenye emuva forehand. Intamo ngokushelela ku emahlombe, ekhuluma ngolimi olulula. Cabanga ukwakhiwa iphethini amahembe Raglan.
Okokuqala kukhona ezinye iziqondiso jikelele:
Ukuze indwangu kulezo zindawo lapho ezivuzayo zenziwa, uvumelana nezimo, ingxenye amaphethini kudingeka ugaye phansi Stitch ewumngcingo amazombe.
Futhi ukuze emaphethelweni phansi uhlala Olwandisekayo podgibku kudingekile Neaten overlocking. Khona-ke awahlanganise usebenzisa le njongo inaliti abangamawele.
Kuyefana nasendleleni nezinye imiphetho umkhiqizo aliqede, kubalulekile ukuba zigcine kuyaqina yabo.
Njengoba nesifanekiso besilisa isikibha Raglan, ngezindlela ezithile iyafana iphethini evamile kwezemidlalo amahembe. Lesi sibalo sikhombisa emigqeni nentaba sokwakha emuva forehand futhi imikhono.
Izilinganiso zithathwa ziyefana for the evamile izikibha: poluobhvat entanyeni, esifubeni, ukuphakama umkhiqizo nobude emikhonweni manje kuphela ikhumbula yokuthi kuzoqhubeka esuka emphinjeni.
Raglan ukwakhiwa phezu kwephethini phambili hlangana neengcezu labaqaphi elingemuva. Kusukela iphuzu esiphezulu ehlombe agudle entanyeni uyephuza 4 ngamasentimitha. Futhi manje-ke kuyadingeka ukuba sihlanganise lezi amaphuzu nge iphuzu esiphezulu umthungo ohlangothini. Yekuchumana Raglan ehlukile futhi zibashukumisele ohlangothini emikhonweni futhi abahlobene nabo.
Lapho konke lokhu kwenziwa, qiniseka ukukhipha izingxenye Raglan ngaphambili futhi ngemuva iphethini.
Zonke izinto kumele isayinwe, ukuze kuthi lapho lokuthunga izikibha ungabi udidekile.
Osenyameni ukudala albhamu ngezandla zakhe
Iphethini imvilophi ukuze hooded osanda kuzalwa: izici, izincazelo kanye
Le filimu "izibulo": nabalingisi izindima
Moscow Agricultural Academy Timiryazev. izithombo